IJOOLLEE TOO YAA TIRUU | Oromia Shall be Free
bilisummaa May 21, 2022	Comments Off on IJOOLLEE TOO YAA TIRUU
Magaallan koo yaa tiruu
Kan akka keessanii addunyaarra hin jiruu
Kan roorroo qabee sonaan ciru
Gabrummaa abootteen inni diru!
Qarreewwan too yaa tiruu
Qeerroowwan koo  yaa tiruu
Kan akka keessanii mee
Dachee tanarra hin jiruu!
Waggaalee afur cufaa
Qabsicha itrtum fufaa
Asxaa isa akka faachaa
"Down, down Wayyaanee down" jechaa
Uummata keessa abdachaa
Yaa joollee Abbaa Gadaa
Yaa joollee Haadha SIIQQEE
Nafxanyaan yoo olmiixxee
Galma Gadaattoo hiiqxee
Sintoo qabee cagadaa!
Hayyee qeerransoota tiyya
Hayyee gichillooota biyyaa
Harr'as uummanni keessan
Ammas biyyi teessan
Yaa dhalawwan biyyaa!
Firiin qabsoo keessanii
Bu'aan madaa keessanii
Manneen hidhaa jigsitan
Gabrummaan dhiiga keessaniin finqilchitan
Nafxanyaan + ("plus") ta'ee
Isinimmoo - ("minus") taatanii
Shaabiyaan gooftaa ta'ee
Isinoo ashkara taatani!
Kunoo ijuma teenya duratti
Funyaanum keenya fuulduratti
Miilli garagaleetoo mataa hooqa!
Hayyee, hayyee yaa ijoollee koo
Ilaa, ilaa yaa lubbuu too
Ammas  akkum kaleessaa oljedhaatii dhaabaddhaa
OROMIYAA guutuu-rraa walitti iyyaddhaa
Waboo wabii keessanii cimsaddhaa
Marroo marii sabaa gargaaraa
Gabrummaa akka gaangeetti miila afranuu takaalaa!
ODAA abbaa biyyummaa
Dhalawwaan Kuush Kuusaas
Afrikaa guuturraa waammaddhaa
Kan qotattanii facaafattan
Tan gixaantanii haramattan
Naafxoof mitii ofii keessaniif haammaddhaa!
* Ani jecha "dammiroo" jedhamu kana sirba obboo Rooberaa Amanuu isa : "Dammiroo - New Oromo Music 2021", baafame irraan yeroo duraa dhagaye. Mee "youtube" banaddhaatii, sirba shaggaa kana dhamdhamaddhaa! Erga sirboota qabsoo Oromoo dhaggeeffachuu jalqabdanii, mee geerrarsa hedduu bareedaa, isa dachee sochoosu: "wbo New Oromo music (23 December 2021)", kan jedhamus itti-dabaladdhaa!
** Mee walaloon kun yaadannoo Abbaa Gadaa Oromoota Karrayyuu, obboo Kadir Hawaas Boruu fi miseensota Gadaa Michillee isaan jalqaba ji'a kanaa irratti mootummaa Koloneel Abiyyi isa nafxanyootaan durfamuun galaafatamaniif yaadannoo haa-tahu!
==============    //    ==============
Previous Hireen WBO maal ta’uuf deema?
Next Faaydaalee ganama ganama garaa duwwatti bishaan dhuguun qabdu